Baarlamaanka Soomaaliya oo shuruud ku xiray in shirkad Turkish ah maamusho dekeda Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamaanka Soomaaliya oo shuruud ku xiray in shirkad Turkish ah maamusho dekeda Muqdisho
Muqdisho – Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay shuruud ku xiray heshiis 27-kii bishii October ee 2013 ay ansixiyeen Golihii Wasiirrada xukuumaddii Saacid, kaasoo dhigayey in dekedda Muqdisho lagu wareejiyo shirkad laga leeyahay dalkja Turkiga oo lagu magacaabo Al Bayrak.
Kulanka oo uu guddoominayay guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Somalia, Mahad Cabdalle Cawad ayaa waxaa waxyaabihii looga dooday ka mid ahaa heshiis horay xukuumadda Soomaaliya ula gashay shirkadda Turkiga ah ee Al Bayrak, waxaan baarlamaanku go’aamiyey inaanay xukuumaddu ku wareejin karin shirkad shisheeye dekedda Muqdisho illaa heshiiska laga waafajinayo sharciga maal-gashiga Soomaaliya.
Baarlamaanka ayaa markaas kadib cod ku go’aamiyey in muddo 30-casho gudahood ah ay xukuumaddu ku horkeento baarlamaanka heshiiskii lala galay shirkadda Turkiga ah ee la doonayey in lagu wareejiyo dekedda Muqdisho.
Waxaa sidoo kale, baarlamaanka go’aamiyey in shaqaalaha hoose ee dekedda aan shaqadooda looga ceyrin Karin si gardarro ah, arrimahaas oo dhowr jeer ay cabteen dadka ka shaqeeya dekedda Muqdisho ee muruqmaalka u badan.
Heshiiska baarlamaanku shruuudda ku xiray ayaa bishan 24-kii bishoo October, 2014 dhexmray wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka badda iyo shirkad Turki ah oo lagu magacaabo Al Bayrak, waxaana golaha wasiirrada Soomaaliya ansixiyey 27-kii bishii October ee 2013.
Heshiiska labada dhinac ayaa dhigayey in shirkadda Al Bayrak maamuli doonta howlaha dakadda muddo 20 sano ah, iyadoo shirkaddu dhanka kale ay dayactir, qalabeyn, iyo casriyeyn-ba ku sameyn doonto dakadda Muqdisho.